Neymar oo Jirkiisa ku Sawirtay Xusuus hore oo Barcelona ah si ay Dhiiro galin ugu noqoto kulanka Real Madrid!!! – Gool FM
Neymar oo Jirkiisa ku Sawirtay Xusuus hore oo Barcelona ah si ay Dhiiro galin ugu noqoto kulanka Real Madrid!!!
Byare February 12, 2018
(Madrid) 12 Feb 2018. Bandhig shidan uu la yimaado Neymar kulanka Champions League ay arbacada Bernabeu kula ciyaari doonaan Real Madrid ayaa u noqon doonta talaabo kale uu u qaaday hadafkiisa inuu noqdo laacib sare, wuxuuna baryahaan baadi goob ugu jiray wax dhiiro galin u noqda.
Xiddiga reer Brazil ayaana go’aansaday inuu jirkiisa ku xardho koobkii Champions League uu la qaaday Barcelona 2015 si ay u niyad galiso kulanka Arbacada.
Adao Rosa ayaa qalinka u qaatay oo Lugta uga sawiray isagoona baraha bulshada soo dhigay.
A post shared by Adao Rosa Tattoo Artist ⚓ C/S (@adaorosatattoo) on Feb 9, 2018 at 7:39am PST
#NauticaTattooTeam @thierespaimtattoo mandando mais uma no craque @neymarjr teyyyyy
A post shared by Adao Rosa Tattoo Artist ⚓ C/S (@adaorosatattoo) on Feb 8, 2018 at 5:08pm PST
QOSOL iska dhaafee xitaa DHOOLA CADDEYNTA ayaa laga mamnuucay xiddigaha Chelsea!!
Sharikadda PUMA oo ku dhufatay faa'iidadii ugu badnayd abid + Sawirro